Lwesibili 2 Mashi 2021
Ubunikazi Bomkhiqizo Leli Isu Lebhizinisi Lomuntu nomuntu ne-IDentity Project. IBlackDrop iyinqolobane yezitolo nomkhiqizo othengisa futhi usabalalise ikhofi. IBlackDrop yiprojekthi yomuntu siqu ekuqaleni eyenzelwe ukusetha ithoni nesiqondiso sokudala sebhizinisi lokudala elizimele. Le Identity Brand yenzelwe inhloso yokubeka ama-Aleks njengochwepheshe onokwethenjwa womkhiqizo emphakathini wokuqalisa. IBlackDrop imele uphawu lomqali olucashile, lwesimanje, oluhlose ukuba uphawu olungaphelelwa isikhathi, olwaziwayo, oluhola embonini.
Msombuluko 1 Mashi 2021
Izithombe Zochungechunge Iphrojekthi yabaculi isebenzisa ngokunenzuzo izici zesakhiwo se-U15 ukwakha ubudlelwane nezinto zemvelo ezikhona emcabangweni wokuhlangana. Basebenzisa ukwakhiwa kwesakhiwo kanye nezingxenye zayo, njengemibala nemimo yazo, bazama ukukhipha izindawo eziningi njenge-Chinese Stone Forest, iAmerican Devil tower, njengezithombe zemvelo ezifana nezimpophoma, imifula, kanye namawa amatshe. Ukunikeza ukuhumusha okuhlukile kuzo zonke izithombe, abadwebi bahlola isakhiwo ngokusebenzisa indlela ye-minimalist, besebenzisa ama-engeli ahlukene kanye nemibono.
Sonto 28 Februwari 2021
Iwashi Lesikhathi I-Argo kaGravithin isicwicwdi sesikhathi sokwakheka okuphefumlelwe yi-sextant. Ifaka ukudayela okuqoshwe kabili, kutholakala ngemithunzi emibili, iBlue Blue neBlack Sea, ukuhlonipha i-adventures yasenganekwaneni ye-Argo. Inhliziyo yayo ishaya ngenxa yokubhukuda kweSwitzerland Ronda 705 quartz, kuyilapho ingilazi yesafire nensimbi eqinile engu-316L iqinisekisa ukumelana okwengeziwe. Ibuye ingangeni namanzi i-5ATM. Iwashi liyatholakala ngemibala emithathu ehlukene yamacala (igolide, isiliva, kanye nomnyama), izithunzi zokudayela ezimbili (i-Deep Blue ne-Black Sea) nezinhlobo eziyisithupha zokubhinca, ngezinto ezimbili ezihlukile.
Mgqibelo 27 Februwari 2021
Ukwakhiwa I-Eataly Toronto iqondaniswe nama-nuances wedolobha lethu elikhulayo futhi yenzelwe ukuthuthukisa nokwengeza ukushintshaniswa kwezenhlalo ngomthamo womhlaba wokudla okukhulu kwase-Italy. Kuyafaneleka kuphela ukuthi i- "passeggiata" yendabuko futhi engapheli ingukuphefumulelwa kwesakhiwo se-Eataly Toronto. Lo mkhuba ongaphelelwa isikhathi ubona abaseNtaliyane njalo kusihlwa beya emgwaqweni omkhulu no-piazza, ukuze bahambe futhi bahlanganyele futhi ngezikhathi ezithile bayoma emigoqweni nasezitolo endleleni. Lolu chungechunge lwamava lubiza isilinganiso esisha somgwaqo esiseduze eBloor naseBay.
Ibhokisi Lokutshala Elizinikele Eliwuhlobo Olufana
Lwesihlanu 26 Februwari 2021
Ibhokisi Lokutshala Elizinikele Eliwuhlobo Olufana I-Bloom yibhokisi lokukhula elizinikele elisebenzayo njengefenisha yasendlini eyisitayela. Inikezela ngezimo eziphelele zokukhula zabathengi. Inhloso enkulu yomkhiqizo ukugcwalisa isifiso nokukhulisa labo abahlala ezindaweni zasemadolobheni abanokufinyelela okuncane okuluhlaza endaweni. Impilo yasemadolobheni iza nezinselele eziningi empilweni yansuku zonke. Lokho kuholela abantu ukuthi bangazinaki imvelo yabo. I-Bloom ihlose ukuba yibhuloho phakathi kwabathengi nezifiso zabo zemvelo. Umkhiqizo awuzenzakaleli, uhlose ukusiza abathengi. Ukuxhaswa kwesicelo kuzovumela abasebenzisi ukuthi bathathe isinyathelo ngezitshalo zabo okuzobavumela ukuba bakhulise.
Lwesine 25 Februwari 2021
Chapel Uhlobo lwe-bionic lomkhomo lwaba ulimi lwale chapel. Umkhomo uboshiwe ogwini lwase-Iceland. Umuntu angangena emzimbeni wakhe ngokusebenzisa indawo ephansi yokudoba izinhlanzi futhi athole umbono whale ngokubheka olwandle lapho kulula khona ngabantu ukukubonisa ukunganakwa kokucekelwa phansi kwemvelo. Isakhiwo esisekelwayo siwela ogwini ukuqinisekisa umonakalo omncane endaweni yemvelo. Izinto zokwakha zemvelo nezemvelo zenza le phrojekthi ibe yindawo yabavakashi efuna ukuvikela imvelo.
Ubunikazi Bomkhiqizo Izithombe Zochungechunge Iwashi Lesikhathi Ukwakhiwa Ibhokisi Lokutshala Elizinikele Eliwuhlobo Olufana Chapel